Democratic Party Yoita Vakawanda Vanoda Kupinda Musarudzo yeMutungamiri weNyika
Sen. Kamala Harris, D-Calif., speaks to students at Drake University in Des Moines, Iowa, Jan. 28, 2019.
Hurongwa hwekutsvaga munhu achamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica hwatanga zvine mutsindo zvichitevera kubuda pachena kwevnhu vanodarika gumi vazvipira kupinda musarudzo iyi.
Vanhu vabuda pachena kuti vari kuda kukwikwidza musarudzo yemubato reDemocratic Party vanosanganisira vanhukadzi vane mukurumbira munyaya dzematongerwo enyika.
Madzimai aya anosanganisira seneta weCalifornia, Amai Kamala Harris; mumiriri weHawaii muHouse of Representatives, Amai Tulsi Gabbard; seneta weNew York, Amai Kirsen Gillibrand; seneta weMassachusetts, Amai Elizabeth Warren; seneta weMinnesota, Amai Amy Klobuchar, nevamwe.
Madzimai aya achange achikwikwidzana nevarume vakaita saseneta weVermont, VaBernie Sanders; seneta weNew Jersey, VaCory Booker; vaimbove mumiriri wedunhu reMaryland muparamende, VaJohn Delaney, nevamwe.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti huwandu hwevanhu vachapinda musarudzo yemu Democratic Party yekutsvaga achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika, huchakwira kudarika pahuri pari zvino.
Asi nyanzvi idzi dzinoti vakawanda vachakanda mapadza pasi kwosara vashoma vanokwanisa kuenda kumusangano mukuru webato iri, weDemocratic National Convention, wekuvhotera munhu achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika.
Anokunda musarudzo iyi achakwikwidzana naVa Donald Trump, veRepublican Party, musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa gore rinouya.
VaTrump vanoonekwa nevakawanda semhepo yeSunami munyaya dzematongerwo enyika, zvokuti anomisidzana navo, anofanirwa kunge akasimba senjanji.
Chizvarwa chezimbabwe chiri kuita zvidzidzo zvepamusoro soro muWashington DC, VaKelvin Manduna, vanoti zvinovafadza chose kuona zviri kuitika mubato reDemocratic Party pasina kutyityidzirana kana kunyombana kwatinoona kuchiitika muZimbabwe.
VaManduna vanoti zviri pachena kuti vanhu vanopinda musarudzo vakasununguka, uye anenge akundikana, anobuda osiya vamwe vachienderera mberi.
Hurukuro naVaKelvin Manduna
Peturu Yokwira Zvakanyanya Zvichakwidzawo Mitengo Yakawanda
Kushaikwa kweMagetsi Kwoita Kuti Veruzhinji Vatambure
Varwiri veKodzero Vana Vopemerwa Mhosva yeKuda Kupidigura Hurumende yaVaMnangagwa
Zvikoro Zvakaparadzwa neCyclone Idai Zvinovhurwa Zvose kuChimanimani
VaLeo Mugabe Vokundikana Kubhadhara Vashandi Papurazi